Fandaharam-potoana tsara hitehirizana ny efijery sy hanovana horonantsary - Geofumadas
Amin'ity vanim-potoana vaovao 2.0 ity dia niova be ny teknolojia, hany ka mamela antsika ho tonga amin'ny toerana izay tsy afaka natao taloha. Fampianarana an-tapitrisany maro izao no natsangana tamin'ny lohahevitra marobe ary natao ho an'ny karazana mpihaino rehetra, rehefa nandeha ny fotoana dia nanjary nilaina ny nanana fitaovana mamonjy ireo fihetsika izay vokarintsika amin'ny alàlan'ny efijery solosaina, ohatra, mitaky ny fampianarana video fanovana fanodinana toy ny fanapahana, fitantarana, fampidirana atiny an-tsoratra na fanondranana atiny amin'ny endrika samihafa, hanolorana vokatra misy kalitao.
Noho izany dia misy fitaovana ampiasain'ny matihanina mba hampiseho amin'ny vahoaka ny fomba fanaovana zavatra, hamahana olana na hampianarana fotsiny. Miresaka momba izany isika Screencast-O-Matic, izay ahafahana manao rakipeo amin'ny alàlan'ny tranokalany na amin'ny alàlan'ny fampidinana ny fampiharana amin'ny PC, azonao atao ny mampiasa ny iray amin'ireo fampisehoana roa an'ny fampiharana satria mitovy tanteraka izy ireo. Asongadin'ity lahatsoratra ity ny tombony lehibe azo avy amin'izany.
Rehefa mazava tsara ny lohahevitry ny lesona, dia manokatra ny fangatahana hanao ny fandraisam-peo mifanaraka amin'izany ianao, ao amin'ny bar de menu sy ny bokotra "Records" no safidy voalohany.
Avy eo dia misy rindrina iray, izay mametraka ny fetran'ny toerana tokony hitrandrahana rehetra tokony ho hita, dia azo ahitsy araka izay ilaina. Manondro ny karazana fandraisam-peo:
Ny efijery ihany (1),
na ny sarimihetsika sy ny webcam (3),
Ny safidy mifandraika mifanaraka amin'izany dia voafetra: fetra voafaritra mazava (4),
na raha ilaina ny manoratra ny feon'ny PC (7).
Afaka miditra ao amin'ny sakafo hafa (8) hafa ianao, izay hamaritana hoe inona ny fanalahidin'ny famaky, ny fomba hianteherana, ny baikon'ny fanaraha-maso, ny fanaraha-maso na ny zoom.
Mba hampidirana singa sasantsasany amin'ny fanamafisana toy ny zana-tsipìka, efamira, ovale manasongadina lahatsoratra, midira ao amin'ny bar mihitsy mandritra ny fanoratana ary mametraka ny bokotra "pensilihazo". Halefa ny firaketana ary manomboka ny dingana amin'ny fampidirana singa maromaro araka izay heverina fa azo jerena amin'ny sary manaraka.
Ho an'ny Zoom na manakaiky, amin'ny ampahany sasany amin'ny horonan-tsary rehefa voarakitra an-tsoratra, tsindrio indroa dia natao any amin'ny faritra manokana, avy eo hamerina manokatra ny fanoratana ny bokotra mavomavo amin'ny doka ary hanohy ny dingana.
Rehefa vita ny dingana ny fandraisam-peo, ny lahatsary dia naseho ao amin'ny varavarankely fampiharana lehibe indrindra, amin'ny varavarankely io fanovana rafitra hafa dia ampiharina, any amin'izay manampy multimédia singa toy ny dikanteny avy amin'ny rakitra na feo fankatoavana (dia namorona lahatsoratra araka ny fitantarana), mozika mozika (manolotra rakitra mozika tsy mety, na azonao atao ny manampy ampahany sasany izay heverinao fa ilaina).
Mikasika ny fanovana horonantsary dia feno tanteraka ity rindranasa ity, manolotra fitaovana be dia be hahatonga ny tutorial video ho vokatra mahafinaritra sy manazava. Handray horonan-tsary amin'ny PC izahay mba hampisehoana izay fihetsika azo atao amin'ny menio fanovana. Rehefa mamoaka ny horonantsary dia aseho ny efijery voalohany misy ny fakana horonantsary (1) sy ny fizotry ny fotoana (2), eo amin'ny sisiny havia no fananan'ny lamba (3), izany hoe ny haben'ny horonantsary, amin'ity tranga ity dia 640 x 480 izy io.
Toy izany koa,-peo fananana (4) izay ny safidy mba fanondranana feo na manafatra avy amin'ny lahatsary hafa avy amin'ny PC mba hiraketana izany tao an-peo no nahita. Raha ny lahatsary dia noraketina tamin'ny lamba ny safidy sy ny webcam, Afaka mampihetsika ny safidy mba haneho ilay efajoro miaraka amin'ny sary ny Webcam (5), ihany koa no mitranga ny kitondro, dia afaka maneho na hanafina ny lalana ao amin'ny lahatsary ( 5).
Ny fitaovana fanoratana izay ananany Screencast-O-Matic Ireto manaraka ireto:
Hetezo: ampiasaina hanapahana segondra video izay tsy manan-danja.
Kopia: ity fitaovana ity dia mifidy ireo segondra amin'ny lahatsary izay mila averina apetraka
Afeno: afaka manafina ny boaty sary amin'ny webcam ianao na ny cursor maody.
Mampiditra: dia asa iray manampy amin'ny fanoratana vaovao, fanoratana teo aloha, mampiditra fijanonana ao anaty horonan-tsary, ampidiro ny rakitra video ivelany na mametram-peo an-tsoratra izay efa nadika tamin'ny horonan-tsary hafa.
Mampikony: amin'ny alalan'ny mikrô dia afaka mampiditra rakitra feo ao anatin'ilay lahatsary.
Hifanindry: izany fitaovana dia afaka mametraka zavatra maro ao amin'ny lahatsary, avy amin'ny sivana toy ny nanjavozavo ny zavatra nosoratany, sary, contours Video, zana-tsipìka, manasongadina ihany no ampahany ny lahatsary amin'ny alalan'ny endriny, lahatsoratra (loko, endrika sy ny karazany dia elege font), mametram-pirafesana (mametraka zana-tsipìka maromaro, ny iray dia vita, ary avy eo dia adika ary ampiasaina imbetsaka araka izay ilaina).
Avereno: hanolo ny lahatsary amin'izao fotoana izao na hanova ny endriky ny lahatsary ary hametrahana iray hafa.
Fihetseham-po: manafaingana ny fandraisam-peo na mampiakatra azy io.
Tetezamita: ampio andian-tsindrimandry avy amin'ny sary iray mankany amin'ny iray hafa.
Volana: mampifanaraka ny lahatsary misy lahatsary ambony na ambany.
Mamorona video farany
Any amin'ny faran'ny lahatsary, ary mifanaraka amin'ny fanontana, kitiho ny bokotra "Done", izay mitondra mankany amin'ny efijery mainty amin'ny fampiharana, misy safidy roa safidy:
Vonjeo amin'ny solosaina: ny lahatsary endrika eo MP4, AVI, FLC, GIF, rakitra ary ny anarany no nametraka Output lalana, tsara (ambany, na ny ambony ara-dalàna) amin'ny farany dia mamoaka mazava kitihina no voafidy.
Screencast-O-Matic: Io safidy io dia namoaka tahirin-kevitra izay ny lahatsary, lohateny, famaritana, ny tenimiafina, fanao rohy (raha ilaina), kalitao, ary aiza dikanteny ho hita maso no aseho. Ny fahitana ny lahatsary dia mipongatra ao amin'ny sehatra tranonkala malaza indrindra, toa an'i Vimeo, YouTube, Google Drive na Dropbox, raha toa ka tsy mety ny hamoaka izany, dia aleo tsy misy ny safidy.
Misy zavatra maro izay azo atao amin'ny Screencast-O-Matic maimaim-poana no azo atao mba hanoratra ho any 15 minitra, MP4, FLV AVI sy endrika ary mampakatra votoaty ho eo ambony sehatra aterineto, na izany aza, fa ireo mpampiasa Premium misy tombontsoa lehibe, toy ny fananana toerana sy tahiry an-tserasera amin'ny tranganà tsy fahombiazana, miaraka amin'ity sehatra ity no mametrahanao toerana ao amin'ny rakitra PC ary afaka miditra ao amin'ny tranonkala ny rakitsary rehetra ao amin'ny ordinatera .
Ireo mpampiasa Premium Mahafinaritra azy ireo ny mampiasa fitaovana fanontam-pirinty, manangona feo amin'ny alalan'ny microphones, afa-tsy amin'ny webcam, horonam-peo ary zooming mandritra ny firaketana.
Mba hahafantarana misimisy kokoa, mitsidiha ny Screencast-O-matic
Previous Post«Previous UNIGIS WORLD FORUM, Cali 2018: traikefa GIS izay milaza sy manova ny orinasanao
Next Post Fivoriam-be fanao isan-taona ao amin'ny tambajotra iraisam-pirenena Amerikana an'ny Cadastre sy ny firaketana an-tanetymanaraka »